Match de Firaisankina Afa-bela tamin’ny mpanao gazety ny mpanao politika
Tontosa omaly alahady 26 janoary teny amin’ny amin’ny kianja Elgeco Plus By Pass Ambohijanaka ny lalaom-pirahalahiana baolina
kitra “Match de Firaisankina” miverina nifanandrinan’ny ekipan’ny mpanao gazety tamin’ny ekipan’ny mpanao politika Malagasy. Afa-bela tamin’ny ankapobeny ity farany raha nandresy ny mpanao gazety 1-0 tamin’io lalao natao omaly io. Tsy nahavita ny “remontada” nokasainy hatao anefa ry zareo. Efa resy 8-4 mantsy tamin’ny lalao mandroso notontosaina tamin’ny 06 aogositra 2019. Raha atambatra dia 8-5 no fitambaran’isa. Afa-po izahay tamin’ny ankapobeny, hoy ireo mpikarakara mirahalahy dia i Alphe Léon avy amin’ny Alphe Génération sy Atoa Tolihare Tsifanahy teny amin’ny By pass omaly. Maro ireo mpijery namaly ny antso ary nitombo betsaka ihany koa ireo mpilalao nandray anjara na tamin’ny an-daniny na tamin’ny an-kilany. Nampiditra ny baolina nandresen’ny mpanao politika teo amin’ny minitra faha-65 i Jerisson Joseph (mpilalaon’ny Fair Play). Samy nahazo amboara tandrify azy avy moa ny ekipa roa tonta ary notolorana amboara manokana ihany koa ireo mpilalao mendrika indrindra dia i Guy Maxime ho an’ny mpanao politika. I Guy Tsimarofy avy amin’ny IRD mpiandry haraton’ny mpanao politika izay nanavotra baolina maro tamin’ity lalao ity no tokony ho notononin’ny mpikarakara satria i Guy Maxime dia efa nahazo karatra mavo ka tsy tokony ho mpilalao mendrika izany. Ny namana Dani na Rakapy avy amin’ny Gazety Le Quotidien sy Vaovaontsika teo amin’ny mpanao gazety.Tonga nanokatra ity lalao ity sy nandaka ny baolina voalohany ny filohan’ny Fampihavanana Malagasy, Maka Alphonse. Nanolotra ny amboara kosa i Me Kira sy ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety, Gerard Rakotonirina.